KuSaTeerera! (Shona) – Evangelical Tract Distributors
Home › KuSaTeerera! (Shona)
Kwakanga kunomumwe murume waiva navana vaviri, Ben naRejina. Vana ava vaiterera baba wavo nguva dzose. Vaiva vana vakanaka.
Rimwe zuva baba wavana ava akabaya nguruve yake. Akavedzenga nyama yacho, yakanga yakanuna samare, ndokubva ainanika mumadziro memba. Apedza kuinanika akadaidza vana vake, Ben naRejina.
Baba akati kwavari, ‘Onai vanangu, ini ndichambotevera amai venyu kumunda. Ndinoda kuti mugare pedyo nenyama yedu, muchitanda nhunzi. Mukarega nhunzi dzichigarapo, nyama yose ichaora, nokuti nhunzi dzinoisa honye. Vana vakatenda kuita sezvavakarairwa nababa wavo. Uye vaifarira nyama yenguruve zvikuru. Baba vakaenda zvavo kumunda.
Vana ndokusara vachirova nokutanda nhunzi dzose dzaida kugara panyama. Hapana yakakwanisa kuisa honye panyama.
Garegare pakasvika imwe nhunzi huru inonzi chigara mbabvu. Nhunzi iyi yaiyevedza kwazvo. Yaiva namavara akasiyana aipenya nokutaima kwazvo. Nhunzi iyi yakasviko mhara panyama.
Ben akada kuti aitande asi hanzvadzi yake yakati, ‘Ah, usatande timboitarisa. Nhunzi ine mavara akanaka kwazvo iyi.’ Ben akatenderana naye achiti, ‘Ichokwadi nhunzi iyi inemavara akanaka. Dai baba vakanditengera bachi rakadai.’
Nguva yose iyi nhunzi yakanga iri mubasa rokuisa makonye panyama. Vana havana kuitanda nokuti yaitarisika zvakanaka. Yakati yapedza basa rayo, vana varipakati pokuyemura, yakabururuka zvayo. Dzimwe nhunzi dzakauya kuti dzigare panyama dzakatandwa nokurohwa navana.
Ava manheru baba vakauya. Vakatarisa nyama vakaona, haiwa, honye dzinongotakanyika. Manheru iwayo Ben naRejina vakarohwa neshamhu yomupuranga nababa, vakaridza mhere huru.
Vana ava vakarangwa nokuti vakanga vasina kutanda nhunzi imwechete. Nhasi vazhinji vanosiya chiKristu chavo nokuti vanotendera zvivi zvinenge zvidiki muupenyu hwavo. Zvivi izvi zvinoyevedza senhunzi inonzi chigara mumbabvu kana vachizviita. Asika, pakupedzisira Mwari achavaranga. ‘Vanhu zvavakatemerwa kuti vafe kamwe chete, kutongerwa kugotevera’ (Heberu 9:27).
Kana tichitendera chivi chimwechete chiduku muupenyu hwedu papedzisa upenyu hwedu hwose huchadyiswa nechivi chatinotendera. Isu toga hatigone kutanda zvivi zvinoyevedza. Jesu Kristu akauya kuva Muponesi wedu. Jesu akafa pamuchinjikwa kuva chipiriso chezvivi zvedu zvose. Jesu akamuka kuvakafa kuti nhasi tive nesimba mukuyedzwa kwose. Saka, ‘Tichatiza sei (kurangwa kwaBaba wokudenga), kana tisinehanya nokuponeswa kukuru kwakadai?’ (VaHeberu 2:3).
NDINODA ZVINO KUTEERERA JESU
Kana muchida batsiro, tinyorerei: